Otu n'ime ndị kasị mgbanwe ndị anyị hụrụ si mgbanwe ke mobile technology bụ nnukwu abawanye na ọnụ ọgụgụ nke videos ma dere na gwusia, na-ebi-ọzọ ọkaibe ndekọ technology yana onye insatiable ahịa n'ihi na ị na-elele ha site dị iche iche na-elekọta mmadụ media nyiwe, video bụghị nanị ebe a na-anọ, ya na-ewere n'elu. A nile video, oputara na ndị mmadụ chọrọ ụzọ mee ka ha guzo, na Instagram na na na-eme ka ochie anya n'ihi na ihe oyiyi nke ukwuu ke mbiet, ọ bụ ọ na anya na-ahụ na-emekarị njem gafee video n'elu ikpo okwu dị ka nke ọma , na ụdị nile nke ngwa ọdịnala na-enye ochie, 8mm cine igwefoto anya gị mkpachị, ebe a anyị ga-enwe a lee anya na ihe kasị mma maka ma IOS na Android.
1. Vintage 8mm Video Igwefoto (N'ihi na Android)
Mbụ ngwa n'ihi na Android bụ oké ngwa na amama ị ngwaọrụ mkpanaaka igwefoto n'ime ihe 8mm cine igwefoto. Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na ọ bụ ihe onye ọ bụla na-ahụ gị videos ga na-eche!
The ngwa na-agụnye 5 afọ iri themed presets na ọ bụghị naanị inye gị na mma ochie akwụkwọ anya mgbe dere, na-arụ ọrụ na ozugbo, na-egosi na a mata ihe ndị video ga-ele anya dị ka ị na-ndekọ. Nakwa dị ka ndị presets, i nwere ike ịgbanwe mmetụta n'ime ngwa ike ọhụrụ anya nke dakọtara kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ke adianade do a ngwa ga-etinye otu mmetụta jidesie ka oyiyi ị na-dị ka mma. Nwere ike ịjụ n'ihi na ihe n'ezie.
Irè, mfe iji ngwa na-eme ihe niile ị ga-atụ anya.
2. iSupr8 Vintage Video Igwefoto (N'ihi na Android)
Ọzọ mma rendition nke 8mm anya, nke a nwere ike tinye mmetụta na vidiyo ị gbaa n'ime ngwa na i nwekwara ike mbubata na mbụ gbara video na ịgbakwunye ochie anya ndị kwa, ya ọbụna na-arụ ọrụ 1080p mkpebi footage. The 8mm preset-abịa dị ka ọkọlọtọ tinyere a usu nke onye ọrụ kemeghi mmetụta dị ka film scratches na vignette ụdị tinye-ons, Otú ọ dị, mmezi presets na ngwa ịzụrụ, n'ihi ya, ọ bụ uru na-echeta na tupu ịwụnye.
Nke a nwere ike na-emetụtakwa ya nzacha ka stills ka nke ọma, na mmetụta bụ n'ezie nnọọ ihe doro anya, na-eji ngwa na-eji agba grading kama nzacha inye a kpọmkwem rendition nke ibu 8 ọkara.
Mfe iji, nnọọ mma mmetụta, ma mmezi presets na-eri ihe.
3. VivaVideo: Free Video Editor (N'ihi na Android)
Vivavideo enye n'ụzọ zuru ezu fledged nchịkọta akụkọ, gụnyere ike iji kewaa ma sonyere mkpachị, n'ezie na-igwefoto mmetụta maka fim gbara n'ime ngwa igwefoto njikwa, na ikike itinye ndị otu nzacha na video ị mbubata n'ime ngwa.
Na mgbakwunye na 8mm mmetụta e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na nnwale na ka nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ọ bụla oge ịse anya dị ka a Devid agụghị ndị gbara film, unu adịghị mkpa a ọhụrụ ngwa.
Full-apụta na ngwa na-enye ọtụtụ mmetụta, na 8mm bụghị dị ka doro dị ka ụfọdụ ebe a, kama e nwere ihe ọzọ na-ahọrọ karịa ihe ọ bụla ọzọ.
4. S_Video Editor (N'ihi na Android)
Onye a bụ obere dị iche iche, na ọ bụ onye na nchịkọta akụkọ, nanị ihe ọ na-arụ ọrụ video ị mbubata n'ime ya na ọ dịghị ihe usoro nke Ndekọ iji ngwaọrụ igwefoto na niile. Ọ na-agụnye iri na abụọ mmetụta, masks na nzacha, gụnyere a dị mma nke ukwuu 8mm mmetụta na i nwere ike ikpokọta na ndị ọzọ iji nweta ụfọdụ n'ezie pụtara ìhè na-achọ gị videos. Ọ nwere ike na aka nile mkpebi ruo 1080p, ma ọ bụ uru arịba ama na ndi amuma gị mkpa a ngwa ngwa multicore processor n'ihi na ọ na-arụ ọrụ a ezi uche na-agba.
5. Retrica (N'ihi na Android)
Ọzọ-na 8mm mmetụta, onye a bụ naanị n'ihi na ka oyiyi. Otú ọ dị, ebe ahụ bụ ihe doro anya mmachi, e nwere ọtụtụ upsides iji chefuo. Ọ bụ nanị ndị kasị mma mmetụta i nwere ike ịhụ maka 8mm ịke anya. Na-ewere stills na ndị a na nzacha na-emepụta ebube characterful oyiyi a gaara weliri guzozie si a 1960 n'ụlọ nkiri.
Nakwa dị ka na Devid agụghị ndị gbara anya, e nwere 50 ọzọ presets na-enye gị a oke oke na-arụ ọrụ site na.
Ee, ọ bụ nanị n'ihi na ka oyiyi, ma ọ na-eme ya nnọọ nke ọma n'ezie.
6. 8mm (N'ihi na iPhone)
Ikekwe ndị kasị mma rendition nke 8mm anya ke ọ bụla ngwa n'ebe ọ bụla, 8mm bụ a kediegwu ngwa, mfe iji, ọtụtụ nke oke na ọbụna lays-ekwu na a na-eji ihe Oscar emeri film onye. The interface, mgbe mgbe na-eleghara anya na ndị a iche iche ngwa, na-eburu a retro igwefoto ịme anwansị na anya kediegwu agbakwunye a dum larịị nke afọ ojuju ka ịrụ ọrụ. Mmetụta na-etinyere na ozugbo otú ị pụrụ ịhụ kpọmkwem ihe ị na-na-. Na mgbakwunye na 8mm mmetụta i nwere ike iji ọtụtụ ndị ọzọ na Devid agụghị ndị gbara anya gị footage iche-iche gị mmepụta na-ekwe ka n'ihi ọtụtụ ihe nhọrọ.
Ihe fọrọ nke nta na-enweghị ntụpọ na ngwa na-amị pụtara results.
7. Vintagio (N'ihi na iPhone)
A mara mma obere ngwa na-eburu a nso nke mmetụta na mgbakwunye na nke 8mm otu, gụnyere a mma nkịtị nkiri mmetụta na-bụ nnọọ irè. Mfe iji na gụnyere edezi ngwaọrụ-ekwe ka ị tinye music, gbawara n'etiti ma sonyere mkpachị na ọbụna tụgharịa video 180 ogo, ọ na e dere a akụ na ụba nke usability na ụtọ mmetụta na-enwe.
A obere nanị na mkpebi na ọ bụghị dị ka pụtara dị ka 8mm na okwu nke ikpeazụ mmetụta, Otú o sina dị, ọ bụ a keukwu na mfe iji ngwa.
8. iSupr8 (N'ihi na iPhone)
Nke a bụ IOS version nke ngwa na pụtara na anyị Android ndepụta, ebe a na ọ ọnọde otu, na ngwa zuo dabeere ọzọ presets, na ubé mma achọ 8mm mmetụta na a gụnyere na ngwa. Ọzọ, ọ pụrụ etinyere stills nakwa na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ configurable nzacha na ike-atụkwasịkwara n'elu video ma ọ bụ stills dị ka scratches na tụrụ.
A oké interface, na ụfọdụ mara mma mmetụta, nanị caveat bụ na ị na-anabata mmezi eri chọrọ itinye ndị ọzọ mmetụta.
9. Super 8 (N'ihi na iPhone)
A n'ezie elu àgwà ngwa ebe a, ọzọ, ọ na-agụnye ọtụtụ mmetụta na mgbakwunye na nke ibu 8 anya, ma onye a na-aga a nzọụkwụ ma ọ bụ abụọ n'ihu, na-agbakwunye na ikike iṅomi igwefoto shake nakwa dị ka ọkọ na unyi mmebi ike ụfọdụ kediegwu mmetụta.
Na a họọrọ nke anya m gụnyere a fisheye na anya ini enye okụtde interface onye a bụ nanị a ụtọ iji.
A nnọọ ọkachamara na ngwa na-anya na-ele pụrụ iche iji, na-emepụtakwa ụfọdụ oké achọ video na-aga na ya.
10. Lens + (N'ihi na iPhone)
A bụ ihe ọzọ mma ngwa, a oké rendition nke Super 8 na ike ga-etinyere ma video ma ka na-oyiyi, tinyere a nhọrọ nke n'elu 20 ndị ọzọ, ọ na-enye oké ụzọ na-ochie anya na-ewu nnọọ ewu taa.
Ọ bụghị ezi dị ka doro dị ka 8mm ma ọ bụ Super 8 na mmetụta ya nke ọma, ma o sina a oké rendition na bụ n'aka-eme gị ihe nhọrọ ma ị na-ewere stills ma ọ bụ video.
Ọzọ mma, mara mma ngwa n'ihi na iPhone na-amị oké results.
Olee otú iji weghachi iPhone ma ọ bụ iPad si iTunes ndabere
> Resource> iPhone> Top Iri 8mm Video égwu iPhone na gam akporo Smartphone